ချို့တဲ့ပြီးခက်ခဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အစားအသောက်တွေပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း – Sport Gaber
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ အမျိုးမျိုးသော အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အမြဲဖေးမကူညီတတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
၇ရက်သားသမီးအလှူရှင်တွေ လှူဒါန်းထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ လိုအပ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ပြန်လည်လှူဒါန်းမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်နေပြီး လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာလည်း အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်အားဖြည့်လှူဒါန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်..။.
ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနေ့တိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ စက်မှုဝန်ထမ်းတွေအတွက် အစားအသောက်တွေ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်..။
သင်္ဃန်းကျွန်းက ပြည်သူတွေနဲ့ စက်မှုဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဝေဠုကျော်က စားသောက်ကုန်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံပေးဝေပြီး လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး
စေတနာရှင်တွေအနေနဲ့ နောက်ထပ်အလှူတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း အလှူခံတိုက်တွန်းထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
အလှူရှင်များကိုယ်စား စားသောက်ရေးခက်ခဲနေသော သဃ်န်းကျွန်းဇ / မြောက် ကျူးအိမ်များ နှင့် စက်မှု (၁)ဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စု ၅၅စု သို့ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်ဆန် ၃ပြည်၊ကြက်သွန်၊ငါးပိ တို့ကို သွားရောက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ် လိုအပ်နေသူများအတွက်လည်း အလှူခံပါတယ်။
09776089484(Wave Acc). .” ဆိုပြီး အလှူကို အသိပေးဝေမျှရင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အလှူရှင်တွေရဲ့ကိုယ်စား ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းထားတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အလှူပုံရိပ်တွေကိုလည်း အားလုံးက သာဓုခေါ်ဆုတောင်းပေးထားကြတာလည်း တွေ့ရတာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။